'गाएरै नेपालीको आइडल बन्न चाहन्छु'
अन्नपूर्ण शुक्रवार, असोज २०, २०७४ 19653 पटक पढिएको
नेपाल आइडल विजेता भएको कति समयपछि आमाबुवासँग कुरा भयो ?
मैले लगभग एक घन्टापछि फोन गरेर ‘बाबा मैले नेपाल आइडल जितेँ’ भनेर सुनाएँ । उहाँ भावविभोर भएर मलाई आशीर्वाद दिनुभयो । सायद त्यो बेला उहाँले खुसीको आँसु थाम्न सक्न भएन।
तपाईंले सुनाउँदासम्म पनि थाहा थिएन घरमा ?
थाहा त भइसकेको रहेछ । दिदीले सुनाइ सक्नुभएको रहेछ । तापनि मैले नै भनेपछि, मेरो आवाज सुनेपछि उहाँ ढुक्क हुनुभयो । अझ बढी खुसी हुनुभयो।
अहिले पुराना दिन सम्झँदा कस्तो लाग्छ ?
मेरो आँखा रसाउँछ । घरको अवस्था दुःखदायी थियो । बाबाआमा ज्यामी काम गर्नुहुन्थ्यो । कति दुःखले हामीलाई हुकाउनुभयो । पढाउनुभयो । ती दिनहरू साँच्चिकै पीडादायी थिए । अहिले त बाबा नगरपालिकामा काम गर्नुहुन्छ । पहिलेजस्तो दुःख नै त छैन । तापनि हुनु र सुधार्नुपर्ने कुरा धेरै छन् ।
धादिङबाट पोखरा गएपछिका प्रारम्भिक दिनहरूको याद छ ?
त्यो बेलाको दुःख सम्झिँदा मेरो बोली नै रोकिन्छ । चिनेजानेको कोही थिएनन् । न बस्ने ठाउँ, न काम गर्ने थलो थियो । बाबाआमाले गरेको संघर्षकै कारण होला अहिले सबैको साथ र माया मिलेको छ ।
अब त दुःखका दिन गएजस्तो लाग्छ होला ?
यतिधेरै मान्छेको साथ र माया पाएर म नेपाल आइडल बनेँ । अब साँच्चिकै दुःखका दिन जान्छ भन्ने लागेको छ । तर त्यसका लागि अझै अवसरको खाँचो छ । गर्नु धेरै छ ।
यस्तो प्रतियोगिताका कतिपय विजेता त त्यत्तिकै हराएका छन् नि ?
म त्यो चाहन्न । जसरी हुन्छ म नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा केही न केही गर्न चाहन्छु । अब पनि मैले केही गर्न सकिनँ भने त यो जितको अर्थ नै के रहन्छ र ?
घरमा विवाहको कुरा चल्छ ?
विवाहको कुरा भएको छैन । मेरा दाइहरूकै विवाह भएको छैन । म भर्खर २० वर्ष पुग्दैछु । अहिले नै विवाह गरेर के गर्नु र घरको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ ।
विवाहको योजना त होला नि ?
म अब करियरमा फोकस हुन्छु । सबैभन्दा पहिले बाबा आमालाई सुखका साथ पाल्ने आधार बनाएपछि मात्रै विवाहका बारेमा सोच्नेछु ।
कस्तो जीवनसाथी होस् भन्ने लाग्छ ?
मलाई माया गरोस् । व्यावहारिक होस् । खासगरी बाबाआमालाई राम्रो हेरचार गरोस् । उसको कारणले घरमा खुसी आओस् । सानोतिनो कुरामा माइन्ड नगर्ने ठूलो मन भएको केटी होस् ।
स्कुल कलेज पढ्दा केटीहरूले कत्तिको प्रस्ताव राख्थे ?
राख्थे । चिठी लेख्थे । तर म त्यसको महत्व नै बुझ्दिनथेँ । अहिले सम्झिँदा उनीहरूको भावनाको सायद मैले कदर गर्न सकिनछु जस्तो लाग्छ ।
अहिले चाहिँ प्रेम प्रस्ताव कत्तिको आउँछ ?
दैनिक दर्जनभन्दा बढीको प्रस्ताव आउँछ । सुरुमा ‘आई लभ युवर भ्वाइस’ भन्छ । म ‘थ्यांक्यु’ भन्छु । फेरि ‘आई लभ यु टु’पनि भन्छन् । म फेरि ‘थ्यांक्यु’भन्छु । फेरि ‘आई रियली लभ यु’ भनेर अनेक शैलीमा प्रस्ताव आउँछ ।
कसै न कसैले त मन लोभ्याएको होला नि ?
मेरो ध्यान त्यतातिर छैन ।
तपाईंले यति धेरै भोट पाउँला भन्ने कल्पना गर्नुभएको थियो ?
मैले प्राप्त गरेको भोटले म नै आश्चर्यमा छु । दर्शकको यति धेरै माया र साथले मलाई ठूलो जिम्मेवारी मिलेको छ । म उहाँहरूलाई कुनै पनि हालतमा निराश बनाउन चाहन्न ।
अबको सपना र योजना ?
अब आफ्नै गीत गाएर चिनिने चुनौती र अवसर मिलेको छ । मेरो सपना र लक्ष्य भनेकै राम्रो गायक बनौं, सारा नेपालीको आइडल बन्न सकौं भन्ने हो । त्यो लक्ष्यप्रति म केन्द्रित छु ।
तपाईंलाई कसरी गीतसंगीतप्रति यतिधेरै रुचि भयो ?
दिदी सानैदेखि गाउनुहुन्थ्यो । घरमा क्यासेट बजाएर उहाँले गाएको सुन्दा र हेर्दाहेर्दा ममा संगीतप्रति यति रुचि जाग्यो कि मैले यो क्षेत्रभन्दा अरू सोच्नै छाडेँ ।
नेपाल आइडलमा भाग लिनुभन्दा अगाडि गाएर बाँच्न सकिन्छ जस्तो लाग्थ्यो ?
गाउने अवसरका लागि धेरै मेहनत गरेँ । कतिपय कार्यक्रममा गाउँछु भन्दा कि त लास्टमा राखिदिने कि त सीधै हुँदैन भनिदिन्थे । म निराश हुन्थेँ ।
त्यो बेलाको कुनै अविस्मरणीय क्षण ?
एकपटक एउटा कार्यक्रममा मैले आफ्नो ब्यान्डसँग गाउने अवसर दिन अनुरोध गरेँ । गीत नै नसुनी हुँदैन भनिदियो । त्यसपछि मनमा यस्तो ईख बस्यो केही गरेर देखाउँछु भनेर रातदिन रियाज गर्न थालेँ । भाग्य पनि होला त्यही बेला नेपाल आइडल सुरु भयो । भाग लिएँ । यहाँसम्म आइपुगेँ ।
गीतसंगीतमा लाग्दा बाबाआमाले कुनै समय गाली गर्नुभएको छ ?
सुरुमा गाली गर्नुहुन्थ्यो । घरमा दुःख थियो । खेलकुदमा पनि लागेँ । तेक्वान्दोमा ब्ल्याक बेल्ट लिएँ । सिकाउँथेँ पनि । मैले केही गर्ने धेरै प्रयास गरेँ तर भएन । त्यस्तो बेला गाली पाउनु स्वाभाविकै थियो ।
गाएर कमाएको याद छ ?
मलाई भेनाले पोखराको एउटा दोहोरी साँझमा गाउने काम मिलाई दिनुभएको थियो । तलब महिनाको पाँच हजार थियो । टिप्स अलिअलि आउँथ्यो । मैले निकै समय काम गरेँ ।
पहिलो महिनाको कमाइ कसरी खर्च गर्नुभयो ?
बाबा आमाको हातमा राखिदिएँ । खुसी हुनुभयो । अझ राम्रो गर भन्नुभयो । मलाई हौसला दिन तिमी ठूलो गायक बन्छौं बाबु मेहनत गर्नु भन्नुहुन्थ्यो । बाबाआमाको त्यो वचनले मलाई यति उत्साहित बनाउँथ्यो ।
प्रस्तुती :अशोकप्यासी रार्इ
बालुवाटारबाट 'झुल्किए' नवराज सिलवाल 38292
कालो बोको ढालेर सरकारी निवासमा मुख्यमन्त्री (फोटो फिचर) 6319